Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » I-Delhi ibhekisa ekuNciphisweni kweNani leehotele ze-5-Star
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Ihotele kunye neRestaurant Association of Northern India iyalugxeka ubume bemirhumo ehlanganisiweyo eyaziswa kumgaqo-nkqubo omtsha we-excise waseDelhi.
Uninzi lwamalungu ehotele avakalise inkxalabo yawo malunga nerhafu entsha yaseDelhi eza kuphunyezwa ukusuka nge-17 kaNovemba ka-2021.
Isakhiwo esitsha somrhumo siya kuchaphazela ngokuqinisekileyo umfanekiso weDelhi ngenani elincitshisiweyo leehotele ze-5-star.
Iihotele ezininzi zinqwenela ukuguqula udidi okanye uhlengahlengiso lwazo lube zinkwenkwezi ezi-4 ngenxa yesakhiwo esandula ukuziswa sentlawulo ye-1 crore ngonyaka.
Ngokomgaqo-nkqubo omtsha werhafu, kukho ukungangqinelani ngokupheleleyo kwemirhumo. Kwiihotele ukuya kuhlelo lweenkwenkwezi ezimbini, umrhumo yi-INR 10 lakh kwaye kwiihotele ezintathu kunye neenkwenkwezi ezine, yi-INR 15 lakh kwivenkile ye-F&B. Ngelixa ilayisenisi entsha ye-L-16 (i-5-star nangaphezulu) ilayisenisi ehlanganisiweyo ye-INR 1 crore ethetha ukuba ihotele eneendawo ezimbini kunye nenye eneendawo ezintandathu zihlawuliswa iintlawulo ezifanayo phantsi kweskimu esidibeneyo. I-Banquets ehotele iphathwe ngesazisi esahlukileyo kunye nelayisenisi eyahlukileyo (L-38) kunye nomrhumo ohlawuliswa ngokwendawo yekhaphethi (ii-Rs 5,00,000 ukuya kwi-Rs 15,00,000/- nayo ifunwa lisebe lerhafu. .
Isigunyaziso seelayisenisi ezingama-24×7 zonikezelo lotywala luqukiwe kwaye lwanyanzeliswa kumrhumo oyintlanganisela ngaphandle kokuthathela ingqalelo indawo/ummandla okanye imfuno yeenkonzo zotywala ezingama-24×7 kunye nokhetho lweyunithi yomnini wephepha-mvume.
Iqela lezimvo ezinikelweyo lithunyelwe kuSekela Mphathiswa oyiNtloko ophethe ezeMali naye. Intlanganiso yabathathi-nxaxheba kunye nabathunywa abasuka kuMbutho baye badibana nesebe le-Excise ukuze bahlole umgaqo-nkqubo kodwa akukhange kubekho mpendulo ilungileyo exelwe ngu-Renu Thapliyal, uNobhala Jikelele we-HRANI. Kuyafaneleka ukukhankanya ukuba ukuqaliswa kwemirhumo ehlanganisiweyo akuzange kucetywe liSebe leRhafu okanye ibandakanywe kwidrafti yomgaqo-nkqubo werhafu okhutshelwe izimvo kuluntu/ushishino longezwe iRenu.
Ulwakhiwo olucetywayo lwentlawulo edibeneyo ngokuqinisekileyo luya kuchaphazela iihotele ezinobungakanani obahlukeneyo njengoko iiyunithi ezinenani eliqingqiweyo leeyunithi ziyakufumana kunzima ukufumana kwakhona iindleko zelayisensi. Kukho ukunyuka okubalulekileyo kwintlawulo yelayisenisi kuzo zonke iindidi ezichazwe nguGarish Oberoi, uSihlalo, iKomiti yeLizwe laseDelhi, iHRANI.
“Kuhle ukuba ilayisenisi ehlanganisiweyo iqaliswe nguRhulumente waseDelhi kodwa iintlawulo ezongezelelweyo kwinkonzo yegumbi kwaye emva koko imirhumo yelayisensi yoNyaka kwisidlo ukuya kuthi ga kwi-15 yeedola ezili-XNUMX zeerandi zoyisa ngokupheleleyo ilayisenisi edibeneyo. Akukho mmelwane ilizwe laseDelhi unemirhumo exhome ngolo hlobo kwaye ukuphunyezwa kwemirhumo exhome ngolo hlobo kuya kukhokelela ekutshintsheni kweshishini kwi-NCR nakumazwe angabamelwane,” wongeze watsho uMnu. Oberoi.
Akukho ngcaciso malunga nokuthengwa kotywala kude kube ngoku. I iihotele zijongene nemingeni kunye ne-portal yewebhu yesebe lempahla ehlawulwayo. Eli shishini alikacaci ngenkonzo yotywala kunye nokuthengwa kwemisitho yesidlo nanjengoko ixesha lomtshato sele liqhubeka.
Amalungu ehotele aye azisa uMbutho ukuba ngokwelungiselelo lomgaqo-nkqubo ocetywayo, undwendwe olunomthengi kwaye lunqwenela ukufumana utywala bunikezelwe kwimisebenzi yabo / kumsitho kuya kufuneka kwakhona athathe ilayisenisi yethutyana yee-Rs 50,000/ - ukongeza kwaye athenge. utywala obuvela kwindawo eyabelweyo nto leyo ethetha ukuba undwendwe luya kuhlala ngakumbi kwinkonzo yotywala. Umgaqo-nkqubo onjalo uya kukhokelela ekutshintsheni kwimisitho yesidlo ngaphandle kweDelhi.
Ngokwe-Delhi Govt Order No F.No 10 (39) ENV 2021/ 4941-4970 yomhla we-13 kaNovemba, 2021, zonke ii-ofisi zikaRhulumente zaseDelhi zivaliwe kude kube yi-17.11.2021, ngoko ke akukho ngcaciso inokufunwa kumagosa ngamagosa. iihotele ezinelayisensi. Umhla we-17 kaNovemba 2021, wokuphunyezwa komgaqo-nkqubo kufuneka wandiswe ngenyanga enye kwiihotele.
Kuba, iDelhi lisango laseIndiya kunye nokutsala abakhenkethi abeza esixekweni, kufuneka siziqhelanise nexesha langoku kwaye silungise imigaqo-nkqubo yethu ukuze siyenze ibe nenkululeko ngakumbi, isebenze kwaye ihambelane nemigangatho yamazwe ngamazwe, kunye namaxesha awandisiweyo njengoko kuvunyelwe ngamanye amazwe. .
Umbutho unethemba lokuba uRhulumente waseDelhi uza kubonelela ngekomkhulu, imvakalelo engakumbi kunye nehlabathi jikelele ukukhusela iindwendwe kunye nokhenketho.
Ngokwe-Delhi Govt Order No F.No 10 (39) ENV 2021/ 4941-4970 yomhla we-13 kaNovemba, 2021, zonke iiofisi zikaRhulumente zaseDelhi zivaliwe kude kube yi-17 kaNovemba, ngoko akukho ngcaciso inokufunwa kumagosa ngumnini welayisensi. iihotele. Umhla we-17 kaNovemba 2021, wokuphunyezwa komgaqo-nkqubo kufuneka wandiswe ngenyanga enye kwiihotele.